Khiya Ukhiye Wenut Wama Rims China Manufacturers & Suppliers & Factory
Khiya Ukhiye Wenut Wama Rims - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Khiya Ukhiye Wenut Wama Rims)
ukuklama okwenziwe ngokwezifiso kwamakhabhoni e-carbon fiber ekhishini
ukuklama okwenziwe ngokwezifiso kwamakhabhoni e-carbon fiber ekhishini Incazelo : Plate Egcwele Ye-Carbon Fibre Imininingwane yamanani : intengo incike kumklamo nobungako. Isikhumbuzi : pls usithumele umdwebo (ifayela le-.dxf / .step) Sidinga ukwazi ubukhulu bakho nobukhulu
Umbala we-Orange M3 * 5.0 * 25mm wama-aluminium ume njalo nge-fpv
Umbala we-Orange M3 * 5.0 * 25mm wama-aluminium ume njalo nge-fpv I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze sihlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi zalokhu okuqhamukayo njenge-aluminium hex standoff, ukuma...
I-Aluminium isiqeshana sokushiswa kwamagiya okufika Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala:...
Ukukhishwa okusheshayo kwepayipi okugoqiwe kwamapayipi Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala:...
Ukukhishwa Okusheshayo Kwama-Clamp Aluminium Pipes Clamp Incazelo Yomkhiqizo I-aluminium clamp evundlile evamile ukuyisebenzisa ku-octagonal carbon fiber tube.Yizingxenye ezimbili ezihlukene futhi idinga isikulufa ukuyifaka. Sinezintambo ezivundlile ze-aluminium kanye ne-roll aluminium clamp . Imininingwane: Umbala:...
Ukushintshwa kwamasampula e-aluminium tube eyenziwe ngokwezifiso
Ukushintshwa kwamasampula e-aluminium tube eyenziwe ngokwezifiso IHobbycarbon ngumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machining, insizakalo yokusika i-carbon fiber CNC kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela...
inkambiso ye-M3 aluminium yokuzikhiya ye-self alokhi isikulufa
I-Hobbycarbon inkambiso ye-aluminium yangokwezifiso ze-aluminium yokuzikhiya nge-screw ye-quadcopter I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende amaningi, senza izinhlobo eziningi zehadiwe esitokisini...
I-CNC 16mm inkambiso ye-aluminium yangokwamashubhu
I-CNC 16mm inkambiso ye-aluminium yangokwamashubhu I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
I-Amazon ye-M6 yensimbi ephezulu yokufaka insimbi yokukhiya Isingeniso Somkhiqizo Umkhiqizo ungolunye uhlobo lwe-M6 yensimbi yokukhiya insimbi. Uhlobo lwe-M6 Steel Insert Lock-Nut luyasebenza. Amantongomane e-lens aphezulu e-Amazon asezingeni eliphakeme lensimbi ahlala enza imibala yemvelo. Ngaphandle kwensimbi...
Ukuthengisa ukushisa kwama-aluminium washer e-Ebay Okokusebenzisa i-washers ye-aluminium, ngenxa yezinto ezisetshenziselwa i-aluminium, ingafakwa imibala eminingi ethandekayo.Ithengiswa ngokushisayo emakethe. Sine-size ezimbili esitokweni sethu.M3x7x2.5mm washer ziyafana nezikulufa zesokhethi ngenkathi iM3x8x2mm ifana...
Khiya Ukhiye Wenut Wama Rims Khiya ukhiye weNut wama-Rims Khiya ukhiye we-Nut M12 wama-Rims Khiya Nut for Rims Khiya ukhiye obomvu we-Nut Red Khiya i-Nut yeRim Khiya iNut ne-Washer Khiya Kit Nut Wrench Kit